Waa maxay rabshadu? • Violence que faire ?
Home > Rabshadaha lamaanaha > Waa maxay rabshadu?
Muran mise rabshad?
Itan badan xaasaska iska horyimaadaan wey yaqaanaan mararka qaarkood, waa la kala xanaaqi karaa, iyada oo dhibaato xun eynan ka imaan. Awood isku dhibaateynta xaaska waa mid ka badalan taas. Awood isku dhibaateynta waa mid burburineyso qoyska dhamaantiis. Marka awood leysku dhibaateeyo, waxaa dhumaayo is tixgalinta iyo midnaanta dhexdooda.
Awood isku dhibaateynta xaaska waa mid dhexmarto xaasaska is qabo ama kuwa aan is qabin. Waxeyna dhici kartaa xiriirka bilaawgiisa, sanado markii leysla noolyahay kadib ama marka la kala tagaayo.
Awood isku dhibaateynta waxey u dhacdaa xili xili. Inta badan dhacdooyinkaas, waqtiga markuu sii dheeraado, xiliyadaasi aad ayey iskugu soo dhawaadaan dhibaatooyinka leysgaarsiinaayana aad ayey usii darsadaan. Hadii aanan wax laga qaban, kor usii socodkooda wuxuu keeni karaa dhaawacyo culus xagga nolosha, dhaawacyo aan laga soo kabsan karin, gaari karto ilaa iyo dhimashada qofka la dhibaateeyey
1. Isku karnaashada ayaa kordhaayo
Wada hadalka ayaa joogsanaayo,isaga /ayada qofka wax dhibaateynaayo-neyso waxaa ku adkaanaayo in uu sheegto- sheegato waxa ay dareensantahay iyo waxa eynan raaliga ku aheyn, wuxuu aruursanaayaa ka xumaantiisa-teeda ama in uu waxa walba maamulo uu diido gorgortan, qofka la dhibaateeyey wuxuu arkayaa-keysaa tilmaamo awood ku dhibaateyn ah weyna cabsaneysaa.
2. Waxa ey keento Wood ku dhibaateynta
Xaaska asaga/iyada awooda wax ku dhibaateeyo-so wuxuu xanaaqa iskaaga bixinaa si awood ku dhibaateyn ah oo marwalbo sii xoogsaneyso. Xaaska la dhibaateyeyna wuxuu isku dareemaayaa inuu siriq ku jiro, aad ayuu u cabsanaayaa-neysaa iyo awoodla’aan, waxey u badaneysaa iney ogolaato sida uu rabo xaaska awooda ku dhibaateynaayo.
3. Wada heshiiska
Xaaska asaga/iyada wax dhibaateeyo-so raali galin ayuu sameynaayaa, wuxuu balan qaadaayaa in uusan dib usameyneyn, wuxuu sameynaayaa wax walba si loo cafiyo, qofka la dhibaateeyey waxaa galeyso rajo waxeyna ogalaaneysaa raaligalinta. Asaga/ iyada waxuu-ey yareeynaayaa-eysaa waxyaalaha uu-ey geystay-atay, sababo ayuu-ey u yeelaayaa-eysaa, kuwa eykeentay arimo banaanka ah (walwal…) ama qofka la dhibaateeyey awgeed. Qofka la dhibaateeyey ayada ayaa iska shakineyso ama dambiile usku qaadaneyso, waxey u maleyneysaa iney tahay in ey ayada wax iska badasho.
Dhibaatadii waa la iloobey, ku dhaqanki awood ku dhibaateynti wuu joogsadey, waxaa lagalay xiligii ( bishii malabka), laakiin taasi meel dheer magaareyso, hadii aanan wax looga hortago la sameyn dib ayey dhibaatadii u soo bilaabaneysaa.